Agwaetiti Canary nke Spain na -akwado nkwado maka mgbawa ugwu na -abịanụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Spain » Agwaetiti Canary nke Spain na -akwado nkwado maka mgbawa ugwu na -abịanụ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye isi IGN na agwaetiti Canary, María José Blanco kwuru, "Anyị enweghị ike ibu amụma dị mkpirikpi, mana ihe niile na-egosi na ọ ga-amalite ghọọ ala ọma jijiji nke ga-akawanye njọ nke ndị mmadụ ga-enwe."
Ala ọma jijiji ahụ mere mkpamkpa 4,222 dị nso na ugwu mgbawa Tenegula n'àgwàetiti La Palma.
Ndị ọrụ Canary Islands nyere mkpu odo-nke abụọ na sistemụ ọkwa anọ.
National Geographic Institute nke Spain adọla aka na ntị na a na -atụ anya oke ala ọma jijiji ndị ọzọ na ụbọchị na -abịa.
Ndị ọrụ gọọmentị mpaghara na agwaetiti Canary nke Spain enyela ịdọ aka na ntị maka mgbawa ugwu na -abịanụ, mgbe National Geographic Institute (IGN) nke Spain chọpụtara 'oke ala ọma jijiji' nke mkpamkpa 4,222 dị nso na ugwu mgbawa Teneguía n'àgwàetiti ahụ. La Palma.
Ugwu mgbawa Teneguía n'àgwàetiti La Palma.
The Canary Islands ndị ọrụ nyere ọkwa na-acha odo odo na Tuesday-nke abụọ na sistemụ ọkwa anọ, na-adọ aka na ntị maka ala ọma jijiji nwere ike.
Taa, emelitela ntule ahụ iji kwuo na, n'agbanyeghị na ndị isi ekweghị na mgbawa ga -eme ozugbo, ọnọdụ nwere ike gbanwee ngwa ngwa.
IGN adọwokwa aka na ntị na “ala ọma jijiji ndị ka njọ” na -atụ anya “n'ụbọchị na -abịanụ.”
Onye isi ụlọ ọrụ ahụ kwuru, "Anyị enweghị ike ibu amụma dị mkpirikpi, mana ihe niile na-egosi na ọ ga-abụ ala ọma jijiji nke ga-akawanye njọ nke ndị mmadụ ga-enwe mmetụta karịa." IGN na agwaetiti Canary, María José Blanco kwuru.
Ruo ụbọchị Tọzdee, etinyerela nde cubic 11 (nde 388 cubic feet) n'ime ime ogige mba Cumbre Vieja dị nso na ugwu mgbawa Teneguía, dị ka Canary Islands Volcanology Institute si kwuo, na -eme ka ala bilie site na 6cm (2na) na elu ya.
Mgbawa ugwu ahụ gbawara na 1971, na -emebi ihe na akụ na ụsọ osimiri dị nso, wee gbuo otu onye ọkụ azụ, n'agbanyeghị na ebe ndị mmadụ juru na saịtị ndị njem gbara ya gburugburu emetụtaghị ya. Mgbe ntiwapụ gara aga, ọrụ seismic kwụsịrị, maliteghachi na 2017, na ụbọchị ndị na -adịbeghị anya na -ahụ mmụba nke ịma jijiji.
Akụkụ ndị ọzọ nke Canary Islands nọkwa na ugwu mgbawa na -arụ ọrụ, gụnyere Tenerife's Teide, nke na -apụtabeghị kemgbe 1909, na Timanfaya nke Lanzarote, nke dara ikpeazụ na narị afọ nke 19.